उपत्यकाका तीनै जिल्लामा आज बाट लागेको यो नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ? - Nepali in Australia
May 5, 2021 autherLeaveaComment on उपत्यकाका तीनै जिल्लामा आज बाट लागेको यो नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ?
फुटपाथ तथा खुला ठाउँमा तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलनमा भने रोक लगाइएको छ । उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा १० दिनको क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान दिने आदेशमा भनिएको छ । यसअघि जारी भएका सबै पास भने खारेज गरिएको छ । Source:etajakhabar